Cake Shukulaatada Jarmalka + Qumbaha Pecan Buuxinta (Guriga Lagu Sameeyo) - Keega
Keegga shukulaatada caadiga ah ee Jarmalka oo leh buuxinta qumbaha-pecan iyo subagga shukulaatada
Keeg shukulaatada Jarmalka waa keega shukulaatada aad u fudud, qoyan leh qumbaha-pecan qani ku ah iyo shukulaatada yar yar ee swiss meringue buttercream si ay u wada qabato. Keeggu malaha dhadhan shukulaato xoog leh, ku dhowaad sida a keega jilicsan ee casaanka ah iyada oo aan midabaynta cuntada. Haddii aan dhimashada by keega shukulaatada waa astaanta astaamaha shukulaatada jecel, markaa keegga shukulaatada Jarmalka waa ka soo horjeedka cirifka.
Keeg shukulaatada Jarmalka waa Jarmal gabi ahaanba. Dhab ahaantii waa Mareykan waxaana loogu magac daray Samuel Jarmal, abuuraha shukulaatada shukulaatada caanka ah ee caanka ah. Keegga waxaa loo soo saaray in lagu suuq geeyo shukulaatada macaan ee loo adeegsado cuntada asalka ah ee keegga shukulaatada Jarmalka.
Keegga shukulaatada Jarmalku dhab ahaantii wuxuu ahaa keeggii aabbahay ugu jeclaa. Sannad kasta dhalashadiisa waxaan iibsan lahayn sanduuq Duncan Hines Jarmal shukulaatada isku dhafan iyo gasac ka mid ah qumbaha qumbaha pecan. Gasho galaas dubista iyo foornada. Soddon daqiiqo kadib ayaan si guul la’aan ah isugudayayaa inaan barafeeyo keeg diiran oo qabaw qabow oo dhaxan leh isla markaana aan kala goynayo sheyga. Oh, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado markaa waxaan ogahay hadda. Qabooji keegaaga!
Marka waxaan aaminsanahay inay tahay waqtigii aan dib-u-curiyey keeggan caadiga ah oo aan idinla wadaagay dhammaantiin. Cuntadani waxay run u tahay runta asalka ah ee aad ka heli karto gudaha baakadaha shukulaatada Baker ee lagu daray saliid yar oo khudrad ah taas oo aan dareemayo inay keega ka dhigeyso wax yar. Runtii waa macaan laga sameeyay xoq!
Muxuu dhadhamiyaa shukulaatada macaan ee Jarmalka Baker?
Shukulaatada macaan ee Jarmalku uma xuma sida baarka shukulaatada caadiga ah ee caadiga ah laakiin sidoo kale uma macaan sida baarka shukulaatada caadiga ah ee caadiga ah. Waa iskutallaab udhaxeysa labadaba oo leh 48% kookaha kookaha.
Waxaad ka iibsan kartaa shukulaatada Jarmalka Baker dukaamada raashinka badankood sida Target ama Kroger ee dariiqa wax lagu dubo.
sida loo sameeyo keeg jilicsan oo qoyan
waxyaabaha lagu sameeyo sharoobada galleyda
Waa maxay farqiga u dhexeeya keega shukulaatada Jarmalka iyo keega shukulaatada caadiga ah?
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya keega shukulaatada jarmalka iyo keega shukulaatada caadiga ah waa nooca shukulaatada la isticmaalay iyo xaddiga shukulaatada aad dhadhamiso. Keeg shukulaatada caadiga ah ayaa lagu dhadhamiyay caano shukulaatada caano ah waxayna leedahay dhadhan shukulaato xoog leh.
Keegga shukulaatada Jarmalku malaha dhadhan kookaho xoog leh, xiddiga bandhiggu waa barafowga qumbaha pecan. Mararka qaarkood waxaa lagu qaboojiyaa shukulaatada buttercream si loogu hayo buuxinta mararka qaarna loogu qurxiyo jeeriga marachino.
Sidee looga sameeyaa keega shukulaatada jarmalka xoq
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso markaad dubayso keegga shukulaatada ah ee Jarmalka waa dhalaali shukulaatadaada oo ha u qaboojiyaa. Waxaan ku dhalaalay shukulaatada loogu talagalay swiss meringue buttercream iyo digaagga keega oo dhan hal mar oo ku jira baaquli dhalo ah ka dibna u dhig si uu u qaboojiyo.
Si aad u sameysid keegaaga shukulaatada, soo aruuri dhammaan walxahaaga kahor waqtiga si aad u hubiso inaad haysato wax kasta oo aad u baahan tahay oo aadan ku degdegin inaad hesho waxyaabo gaar ah. Waxaan la socdaa qaaciddada gudaha sanduuqa barxadda shukulaatada iyadoo lagu daray saliidda cuntada qaar ee qoyaanka.
Shukulaatada hoos u dhalaal oo qabow
Ku karbaash ukun beedka si ay u adkaadaan laakiin qoyan qolofta u dhig oo dhinac iska dhig
Isku qas baytarka ku duub ukunta cad si tartiib ah
Dubi keega oo qabow
Habka isku darka wuxuu aad ugu egyahay keega qumbaha koofurta. Kufinta ukunta ukunta ka dibna ku laalaada dheriga la dhammeeyay waxay ka dhigeysaa keeg aad u fudud oo jilicsan.
Ka taxaddar marka aad ukuntaada cad u duubayso cajiinka keega oo ka taxaddar inaadan hawada oo dhan ka burburin ukunta cad. Isku duub baytarkaaga si tartiib ah adoo isticmaalaya spatula oo si tartiib ah kor ugu qaad baytarka gunta hoose ee baaquli kuna laalaab iskeed.
Sanduuqa wuxuu ku baaqayaa seddex 9 ″ keeg laakiin waxaan heystaa labo kaliya sidaa darteed waxaan isticmaalay 8 p digsi keeg halkii ayuuna si fiican u shaqeeyay. Midabka keega la dhammeeyey wuxuu noqon doonaa mid aad u fudud.
Waxa xiga ee ay tahay inaad sameyso waa inaad buuxisid buuxinta qumbaha-digirta. Tani waxay sidoo kale qaadataa xoogaa in lagu qaboojiyo markaa waxaa fiican inaad sameyso ka hor intaadan dubin keegaaga.
Buuxinta dhab ahaantii si fudud ayey isugu timaadaa laakiin waxaad u baahan tahay inaad asal ahaan isku qasdid isku darka 12 daqiiqo oo toos ah si loo hubiyo in ukuntaadu aysan xakameynin.
Isku dar sonkortaada, ukuntaada, vaniljkaaga, subagga iyo caanaha oo ku shub kuleylka kuleylka ah 12 daqiiqo illaa inta dahabi ah ka sii weynaaneyso
Isku laab qumbaha iyo digirta oo ha qabow
U qaybi buuxintaada si siman inta udhaxeysa seddex keeg oo keeg ah kuna keydi ilaa 1 koob dusha sare ee keega
Sifee dhinacyada keega
Waxaan sameeyay qamadi pecan oo laga buuxiyo caano caadi ah kahor laakiin habka soo jireenka ah ayaa ah in la isticmaalo caanaha uumiga. Caanaha uumiga ayaa u istaaga kuleylka sare kana fiican kan caanaha sidaa darteed uma badna inuu xannibo ama gubto. Caanaha uumiga la mid ah maahan wax la mid ah caanaha isku darsan ee sonkor lagu daray.
Ka dib buuxintaada ka weynaatay oo midab ahaan u madoobaatay, waxa kaliya ee haray waa inaad isku laabto qumbahaaga iyo pecans-kaaga. Aniga ahaan, kani waa qeybta ugu wanaagsan ee keega shukulaatada Jarmalka!
Cunnooyinka keega ee loo yaqaan 'strawberry cake' iyadoo la isticmaalayo miraha strawberries cusub
Shukulaatada jarmalka shukulaatada
Intii keeggaygu dubanayay, ayaan sameeyay swiss meringue buttercream . Waxaan ku dari lahaa xoogaa budada kookaha ah buttercream si aan uga dhigo shukulaato laakiin waxaan rabay inaan ku dhaganaado dhadhanka shukulaatada sidaa darteed waxaan u isticmaali jiray shukulaatada dhalaalay halkii.
Oh my GOSH miyuu ahaa mid dhadhan fiican oo kareemo leh! Waxaa laga yaabaa inaan sameeyo dhammaan shukulaatada shukulaatada habkan mustaqbalka. Waxaan sidoo kale dareemay inay sii joogtay kareem xitaa maalinta ku xigta halkii aan ka heli lahaa nooc isbuunyo ah sida subagayga fudud ee u eg inuu sameeyo.
Ku kor mari meeriskaaga meelaha sare ee 'STIFF'
Ku dar shukulaatada aad dhalaashay oo qabow
Isku qas ilaa inta jilicsan iyo kareemka
Qabooji keegaaga oo qurxi sidaad rabto
Sababtoo ah waa inaad diirisaa ukunta cad si ay u dhalaasho sonkorta, waa inaad siisaa meringue waqti uu ku qaboojiyo ka hor intaadan ku darin subagga ama subaggaaga subag wuxuu isku beddelayaa maraq subag ah. Waxaan dardar geliyaa howlaha qaboojinta anigoo baraf xoogaa ah dhigaya salka weelka inta uu isku dhex jiro laakiin sidoo kale waxaad soo qaadan kartaa dhammaan meerisyada oo waxaad ku ridi kartaa digsi gacmeed iyo qaboojiyaha si uu u qaboojiyo.
Haddii aadan rabin inaad ku buuqdo sameynta SMBC markaa waxaad isticmaali kartaa tayda shukulaatada fudud ee buttercream halkii .
Cunto karinta kale ee keega ah ee aad ka heli karto
Cake Velvet Buttermilk Cake
Qaboojiyaha Ermine Buttercream
Keeg Shukulaatada fudud
Shukulaatada Ganache Karbaashay
Sida loo sameeyo keeg shukulaato sax ah oo Jarmal leh qumbaha pecan qumbaha iyo shukulaatada kareemka swiss meringue buttercream. Shaqada dhabta ah ee jacaylka laakiin waa u qalantaa! Waqtiga Diyaarinta:labaatan daqiiqado Waqtiga karinta:30 daqiiqado Kalori:645kcal
Wixii keegga shukulaatada Jarmalka
▢4 ounces (114 g) Shukulaatada Jarmalka ee Baker dhalaalay
▢4 ounces (114 g) biyo diirimaad
▢4 weyn (68 g) ukunta (jaallo iyo cadaan kala go'ay) heerkulka qolka
▢12 ounces (340 g) Bur-ujeedo dhan
▢14 ounces (397 g) sonkorta granulated
▢8 ounces (227 g) caano subag
▢4 ounces (114 g) saliidda cuntada
Wixii buuxinta qumbaha pecan
▢4 ukunta (72 g) jaallo
▢12 ounces (340 g) caano uumi baxday
▢10 ounces (284 g) sonkorta granulated ama sonkorta buniga ah ee dhadhanka hodanka ah
▢6 ounces (170 g) subag aan cusbo lahayn
▢7 ounces (198 g) qumbaha jilicsan
▢7 ounces (198 g) pecans la jarjarey
Loogu talagalay Shukulaatada Swiss Meringue Buttercream
▢8 ounces (114 g) ukunta cusub
▢24 ounces (454 g) subag aan cusbo lahayn jilcisay
▢4 ounces (114 g) Shukulaatada Jarmalka ee Baker dhalaalay oo qaboojiyey 90 to
Foornada horay u sii kululee ilaa 350ºF. Diyaarso seddex dherer 8'x2 'keeg ah oo leh keeg ama waxyaabo kale oo lagu buufiyo digsiga.
Wixii keegga ah
Ku dhalaali shukulaatadaada baaquli aan kululayn karin 15-seken ilaa iyo inta ay ka dhalaalayso. Ha kululayn ama waad gubi kartaa shukulaatadaada. Ku dar biyahaaga diiran shukulaatada kuna garaac isku dar.
Ku rid ukunta cadaan baaquli leh ku dheji lifaaqa iyo karbaash ilaa aad ka gaartid dhagxaanta adag laakiin qoyan. Waa inaysan u muuqan kuwo jajaban ama jajaban. Dhinac iska dhig.
Isku dar subagga iyo saliidda cuntada oo dhinac iska dhig
Iskusoo wada duboo bur, soodho iyo cusbo oo dhinac dhigo.
Wada kareemka subagga iyo sonkorta illaa midab khafiif ah leh
Ku dar ukumahaaga ukunta inta aad isku dhex dardarayso, adoo u deynaya inaad si buuxda isku dhex gasho ka hor intaadan ku darin ukuntaadii ugu dambeysay.
Inta aad ku dhex qasmayso hoose, ku dar shukulaatada aad dhalaashay iyo kuwa la qaboojiyey iyo vaniljiga oo isku walaaq illaa aad isku darto.
Isku darista hoose, ku dar 1/3 oo bur ah, ka dibna 1/3 oo caano subag ah. Ku celi laba jeer oo kale burka haray iyo subagga.
Si tartiib ah ugu laabo ukuntaada cad ilaa aad kareyso.
Dufankaaga ku shub digsiyadaada aad diyaarsatay oo isla markiiba dub ilaa 30 daqiiqo ama ilaa caday ka soo baxdo xarunta isagoo nadiif ah. Qabooji kahor qabowga.
Digsi dhex-dhexaad ah, isku walaaq caano, jaallo ah, iyo vanilj kuleylka dhexdhexaadka ah illaa inta laga qasanaayo.
Ku dar subaggaaga iyo sonkorta oo sii wad inaad kariso kuleylka dhexdhexaadka ah illaa inta isku darku bilaabmayo inuu sii adkaado (illaa 12 daqiiqo). Si joogto ah u fooxo ama waxaad halis ugu jirtaa ukuntaada. Isku daridu waxay noqon doontaa mid qaro weyn oo bunni dahab ah markay diyaar tahay.
Isku dar isku darka kuleylka oo isku laabo qumbaha iyo digirta. Ku qabow joogteynta faafitaanka.
Wixii subagga shukulaatada Jarmalka
Xawaaraha ku celi sare kuna karbaasho ilaa midabku khafiif yahay oo qalafsan yahay. Sii dhadhan, haddii ay weli dhadhamayso subag, sii wad karbaashka
U adeegida:1adeegaya|Kalori:645kcal(32%)|Kaarboohaydraytyada:61g(labaatan%)|Protein:5g(10%)|Dufan:44g(68%)|Dufan Dufan:27g(135%)|Kalastarol:80mg(27%)|Sodium:201mg(8%)|Kalibaalium:152mg(4%)|Fiber:labag(8%)|Sonkor:48g(53%)|Vitamin A:944IU(19%)|Vitamin C:1mg(1%)|Kaalshiyamka:64mg(6%)|Bir:1mg(6%)
miyaad ku kari kartaa ukunta guriga
bambooyin shukulaato kulul leh oo la karinayo marshmallows
sida loo sameeyo keeg qoyan oo qalafsan
keeg labeen dhanaan oo cad